"Daroogo Ayaa Sidaa U Gashay Arturo Vidal" - Giorgio Chiellini Oo Bannaanka Keenay Nolosha Qarsoon Ee Xidda Barcelona - Gool24.Net
“Daroogo Ayaa Sidaa U Gashay Arturo Vidal” – Giorgio Chiellini Oo Bannaanka Keenay Nolosha Qarsoon Ee Xidda Barcelona
Kabtanka kooxda Juventus ee Giorgio Chiellini ayaa sheegay in nolosha laacibka khadka dhexe ee Barcelona iyo xulka qaranka Chile ee Arturo Vidal ay tahay tahay mid maandooriyeyaal ay saamayn ku yeesheen, kuwaas oo uu goob joog uga ahaa afar sannadood oo ay u wada ciyaareen Juventus.
Hab-dhaqanka garoonka gudihiisa ee cadhada badan ka muuqato, waxa uu Chiellini rumaysan yahay inay tahay saamaynta ka dhalata bixitaanka habeenkii ee khamriga uu ugu doonto baararka.
Buug uu qoray Giorgio Chiellini oo loogu magac daray ‘lo, Giorgio’ ayaa waxa uu kusoo bandhigayaa xasuus qorkiisa, dhacdooyinkii uu goob-joogga uga ahaa garoomada iyo xirfaddiisa kubadda cagta iyo hab-dhaqanka ciyaartoyda ka yaabiyey.
Qaybta buuggan ee uu kaga hadlay dhaqanka Chiellini ayaa waxa uu ku yidhi: “Ciyaartoygu maaha Ibliis ama mid xurmaysan. In la kala sooco waa arrin kale, waxayna u dhaxaysaa xaqiiqada iyo beenta.
“Shaqsiyaad, sida Vidal mararka qaarkood wuxuu u baxaa dibedda si uu usoo cabbo, in ka badan intii karaankooda ahayd. Qof walba wuu ogyahay taas. Waxaan odhan karaa in maandooriyuhu uu ka mid yahay meelaha uu diciifka ka yahay. Laakiin taasi su’aal ma gelinayso inuu yahay mid guuleysta ama nooca ay tahay shaqsiyaddiisu.
“Diciifnimadu waa abuur dabiici ah, waxa muhiimka ah waa cawaaqibka ka dhalanaya iyo saamaynta ay ku keenayso kooxda. ”
Chiellini waxa uu buuggiisa ku xusay sida maandooriyeyaashu sababta ugu noqdeen in Vidal uu marar badan garoomada iman waayo, waxaanu ku yidhi: “Arturo ha wanaagsan marar badan kama soo muuqdo tababarka sannadkii.”